Akwazi Velcro kunye Akwazi PSA
amavili super enkulu cut-off
ukugcina utshintsho ekhawulezayo Non-ephothiweyo
amaqhosha utshintsho quick
seeNkozo yodongwe Abrasive
ezo zihlatywa ngaphantsi kwesikhumba ngenaliti lokugaya
1.Characters ye CA ezenziwe indlela sol-gel
CA, eveliswe indlela sol-gel, luhlobo ukutya sintered esirhabaxa. Ngenxa yoko igama njengezehlelo SG okuziinkozo esirhabaxa. Le crystal Ubukhulu ezincinane kakhulu, nto leyo 100-500nm kuphela, yaye kuphela ngaphantsi omnye-ekhulwini corundum eqhelekileyo ubukhulu njengekristale. Iqhekeza 46 # okuziinkozo iqulethe amawaka ezigidi crystal ngamasuntswana. Xa besila, iinkozo kweyakwantu alumina zombane edidekile, baba tyaba kwaye deactive, kwaye ngokulula yehla ukusuka izixhobo esirhabaxa phantsi amandla lokusila. ukuphila kwalo nkonzo imfutshane. Noko ke, ngokuba CA, oko SG iinkozo esirhabaxa, yonke inkqubo enxibe kwakhona inkqubo abazingcayo ulola. Ngexesha yayo inkonzo, elibukhali edge entsha besila ubhenca rhoqo xa passivating crystal iinkozo emihle baphumelela ukusuka izixhobo makasilele phantsi amandla lokusila, nto leyo eyenza iinkozo njalo ubume elibukhali. Ngoko ke, izixhobo esirhabaxa eyenziwe yi CA na yobomi band elide, ubuchule elungileyo self-elizilolayo, kahle eliphezulu ukusika, kwakunye lingade workpieces.
Ngenxa emincinci yayo ezahlukeneyo, CA ibonisa umahluko kwi esirhabaxa yokuziphatha iinkozo zaphuka. CA ubonisa ecaleni umonakalo ngokwaphulwa ngumkhenkce, ngelixa zemveli alumina zombane edidekile, ibonisa umonakalo ngokwaphulwa transgranular. Ngoko ke, kobulembu CA kabini ngaphezu koko kwezi alumina common ezinyibilikiswe.
CA eveliswe yi indlela sol-gel na iikhemikhali Ukwakhiwa efanayo kunye Ukuqinisa WFA (White tho Alumina). Ngenxa kulwakhiwo lwalo uniform ezincinane microcrystalline, ubulukhuni aphezulu kunye nokusebenza ezincinane ezaphukileyo, CA ukuba ngokubanzi zingasetyenziswa egqugqisayo izinto ezinzima-to-nkqubo efana isixhobo sentsimbi, intsimbi ezinzima stainless, ubushushu-resistant ingxubevange ziintsimbi, njl
2.Features zezixhobo esirhabaxa ezenziwe CA
(1) I-iinkozo zibukhali kakhulu, nto leyo yenza kube inomthamo ukusika olomeleleyo, kahle eliphezulu lokugaya. Ingasetyenziswa ukuba ahlabayo Deep, feed maholo, umsebenzi onzima nokutshixiza eliphezulu ukusebenza. Ngokutsho nokuhlola, isondlo inkqubo linye ukufikelela 0.3mm okanye ngaphezulu, izinga ukususwa but is ngaphezu kabini kweevili sokusila corundum eqhelekileyo.
(2) ubulukhuni ezilungileyo, lingonakali encinane, neevili begaya kunye nokugcinwa imilo elungileyo. Kuba ngobuciko ukugaya kunye nefom lokusila, ukuchaneka ephezulu mbini kunye nobukhulu imilo guquki kube lula got.
(3) iyahlala High kunye nobomi inkonzo ende. Oku uyakwazi ukufikelela 5-10 amaxesha kweevili sokusila corundum eqhelekileyo. Low frequency kucuthwe ukunciphisa ixesha processing abangabancedani kunye kwemitshini, nto leyo eyenza kube elungele ukusetyenziswa kolawulo wokwamanani umatshini oluzenzekelayo, eqonda imveliso oluzenzekelayo.
(4) yokusebenza self-elizilolayo ezilungileyo, kungabi Ukuxinana. Oku uyakwazi ukugcina intsebenzo okuguba ngcembe, ukunciphisa ukulungiswa (1/3 malunga kuphela amavili corundum nokutshixiza aqhelekileyo) kunye nokuphucula ukusebenza yemveliso.
(5) Xa besila yokusebenza, CA amavili besila zingcono kakhulu kunokuba amavili lokugaya corundum eqhelekileyo. Kuba ixabiso, CA angaphantsi kakhulu CBN nekalikedo abrasives, lo gama ngokuba lukhuni yayo iyafana naleyo alumina ezifanayo edidekile, nto leyo eyenza kube akukho mfuneko Equipments lokugaya ezizodwa izixhobo ukulungisa. Ngoko ke akukho iimfuno ezikhethekileyo besila Equipments kwaye akukho bezihlabo ezimsongelayo, nobunzima kuthelekiswa CBN kunye abrasives nekalikedo. Kwakhona unalo akukho iimfuno ezikhethekileyo ukugaya ulwelo. Ngoko ke, kulula ukuba ukusasaza ukusetyenziswa kwayo.
Ukwakhiwa 1.Chemical (Ixabiso lohlobo):
2. Index Physical:
ingxinano (g / cm3) Ball Ukugaya kobulembu crystal Size
Previous: amavili ngqo ukusika
Blue yodongwe Grain Abrasive
White yodongwe Grain Abrasive
Zirconia Aluminium nitric
Black Silicon khabhayithi (C)